Mgbanaka ọkụ: ihe ọ bụ, àgwà, ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 06/01/2022 10:00 | Geology
Na mbara ala a, ụfọdụ ebe dị ize ndụ karịa ndị ọzọ, ya mere aha mpaghara ndị a dị ịrịba ama ma ị nwere ike iche na aha ndị a na-ezo aka na ihe ndị dị ize ndụ. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ya Oru oku sitere na Pacific. Aha a na-ezo aka na mpaghara gbara oke osimiri a gburugburu, ebe ala ọma jijiji na ihe omume mgbawa ugwu na-adịkarị.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mgbanaka ọkụ, ebe ọ dị na ihe njirimara ya.
1 Gịnị bụ mgbanaka ọkụ
3 Volcanic ọrụ nke mgbanaka ọkụ
4 Mba ndị ọ na-agafe
Gịnị bụ mgbanaka ọkụ
N'ụdị akpụkpọ ụkwụ inyinya a karịa mpaghara okirikiri, edekọla ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ala ọma jijiji na mgbawa ugwu. Nke a na-eme ka mpaghara ahụ dịkwuo ize ndụ n'ihi ọdachi nwere ike ime. Mgbanaka a sitere na New Zealand ruo n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke South America dum. na ngụkọta ogologo karịa 40.000 kilomita. Ọ na-agafekwa n'ụsọ oké osimiri nke East Asia na Alaska, na-agafe n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke North na Central America.
Dị ka ekwuru na tectonics plate, eriri a na-aka akara ọnụ ebe Plate Pasifik na efere tectonic ndị ọzọ dị ntakịrị na-emejupụta ihe a na-akpọ crust. Dị ka mpaghara a na-enwekarị ala ọma jijiji na mgbawa ugwu, a na-ekewa ya dị ka mpaghara dị ize ndụ.
Emebere mgbanaka Pacific mgbanaka ọkụ site na mmegharị nke efere tectonic. A naghị edozi efere ndị ahụ, mana ha na-agagharị mgbe niile. Nke a bụ n'ihi ọnụnọ nke convection na uwe mwụda ahụ. Ọdịiche dị na njupụta nke ihe na-eme ka ha na-emegharị ma na-eme ka efere tectonic na-agagharị. N'ụzọ dị otú a, a na-enweta ntụgharị nke centimita ole na ole kwa afọ. Anyị ahụbeghị ya n'ọ̀tụ̀tụ̀ mmadụ, ma ọ bụrụ na anyị atụlee oge geologic, ọ na-apụta.
N'ime ọtụtụ nde afọ, mmegharị nke efere ndị a kpalitere nguzobe nke mgbanaka ọkụ nke Pacific. Tectonic plates anaghị ejikọta ibe ha kpamkpam, mana enwere oghere n'etiti ha. Ha na-adịkarị ihe dịka kilomita 80 n'obosara ma na-aga site na convection na uwe mwụda ahụ e kwuru n'elu.
Mgbe efere ndị a na-akwagharị, ha na-ekewa ma na-agbakọta. Dabere na njupụta nke nke ọ bụla, otu nwekwara ike imikpu n'elu nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, njupụta nke efere oke osimiri dị ukwuu karịa nke efere kọntinent. N'ihi nke a, mgbe efere abụọ na-akụkọrịta, ha na-amaba n'ihu efere nke ọzọ. Ntugharị a na nkuko nke efere mere ihe omume geological siri ike na nsọtụ efere ahụ. Ya mere, a na-ewere mpaghara ndị a ka ọ na-arụsi ọrụ ike.
Oke ngbanwe. N'ime oke ndị a, e nwere ebe efere tectonic na-ejikọta ibe ya. Nke a nwere ike ime ka efere dị arọ daa na efere dị mfe. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta ihe a na-akpọ subduction zone. Otu efere na-erufe nke ọzọ. N'ebe ndị a ebe nke a na-eme, a na-enwe ọtụtụ ugwu mgbawa, n'ihi na nbibi a na-eme ka magma na-agbago n'ime ala. N'ụzọ doro anya, nke a agaghị eme n'otu ntabi anya. Nke a bụ usoro na-ewe ọtụtụ ijeri afọ. Otú a ka e si kpụọ mgbawa mgbawa.
Oke iche. Ha bụ kpọmkwem ihe megidere convergent. N'etiti efere ndị a, efere ndị ahụ nọ n'ọnọdụ nkewa. Kwa afọ, ha na-ekewa ntakịrị, na-akpụ elu oké osimiri ọhụrụ.
Mgbanwe oke. N'ime ihe mgbochi ndị a, efere anaghị ekewa ma ọ bụ jikọọ ha, ha na-adaba n'otu n'otu ma ọ bụ n'ahịrị.
Ebe ọkụ. Ha bụ mpaghara ebe okpomọkụ nke uwe mwụda ahụ dị n'okpuru efere dị elu karịa mpaghara ndị ọzọ. N'okpuru ọnọdụ ndị a, magma na-ekpo ọkụ nwere ike ịrịgo n'elu wee mepụta ugwu mgbawa na-arụsi ọrụ ike.
A na-ahụta oke efere dị ka mpaghara ebe a gbadoro ụkwụ na nkà mmụta ala na ugwu mgbawa. Ya mere, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ọtụtụ ugwu mgbawa na ala ọmajiji na-agbakọba na mgbanaka ọkụ nke Pacific. Nsogbu bụ mgbe ala ọma jijiji na-eme n'oké osimiri na-akpata tsunami na mbufịt kwekọrọ. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ihe ize ndụ ahụ ga-abawanye ruo n'ókè nke na ọ nwere ike ịkpata ọdachi dịka ndị dị na Fukushima na 2011.
Volcanic ọrụ nke mgbanaka ọkụ
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na nkesa nke ugwu mgbawa n'ụwa adabaghị n'usoro. Ọ dị iche. Ha bụ akụkụ nke nnukwu mpaghara ọrụ geological. Ọ bụrụ na enweghị ọrụ dị otú ahụ, ugwu mgbawa agaghị adị. A na-ebute ala ọmajiji site na nchikota na ntọhapụ nke ike n'etiti efere. Ala ọmajiji ndị a na-adịkarị na mba Pacific Ring of Fire anyị.
Ma nke ahụ bụ nke a Mgbanaka ọkụ bụ nke na-etinye 75% nke ugwu mgbawa na-arụ ọrụ nke ụwa dum. 90% nke ala ọma jijiji na-emekwa. E nwere ọtụtụ agwaetiti na agwaetiti ọnụ, yana ugwu mgbawa dị iche iche, na-agbawakwa ihe ike. Ọgba mgbawa mgbawa na-adịkarịkarị. Ha bụ agbụ nke ugwu mgbawa dị n'elu efere subduction.
Eziokwu a na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu ụwa nwee mmasị na egwu na mpaghara ọkụ a. Nke a bụ n'ihi na ike omume ha dị ukwuu, ọ pụkwara ịkpata ọdachi ndị na-emere onwe ha n'ezie.
Mba ndị ọ na-agafe
Ogologo ogologo tectonic a na-agbasa ókèala anọ: North America, Central America, South America, Asia na Oceania.
North America: Ọ na-aga n'akụkụ ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Mexico, United States, na Canada, na-aga n'ihu na Alaska, wee sonye Asia na North Pacific.
Central America: gụnyere ókèala Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala na Belize.
South America: N'ókèala a ọ na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Chile niile na akụkụ nke Argentina, Peru, Bolivia, Ecuador na Colombia.
Eshia: Ọ na-ekpuchi ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Russia ma na-aga n'ihu na mba Eshia ndị ọzọ dị ka Japan, Philippines, Taiwan, Indonesia, Singapore na Malaysia.
Oceania: Solomon Islands, Tuvalu, Samoa na New Zealand bụ obodo dị na Oceania ebe mgbanaka ọkụ dị.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere mgbanaka Pacific Fire, ọrụ ya na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Oru oku